သင့်ရဲ့ဖုန်းပေါ်မှာ FACEBOOK ကိုမှဗီဒီယိုများဒေါင်းလုတ်လုပ်လုပ်နည်း - ဖုန်းကို - 2019
Android နှင့် iPhone ကိုက c သင့်ရဲ့ဖုန်းပေါ်မှာ Facebook ကိုမှဗီဒီယိုများဒေါင်းလုတ်လုပ်လုပ်နည်း
သယံဇာတ directory ထဲတွင်စိတ်ဝင်စားဖို့နှင့်အသုံးဝင်သောအကြောင်းအရာအရေအတွက်ကအမှန်ပင်အလွန်ကြီးမားသည်, ထိုသို့အစဉ်အမြဲမရထွက်လှည့်ကြည့်ရှုဖို့အွန်လိုင်းနေဖို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နီးပါး Facebook အမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှကိုအဖွဲ့ဝင်အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်, သင့်ဖုန်းရဲ့မှတ်ဉာဏ်အတွက်လူမှုရေးကွန်ယက်, ယနေ့အထိလူကြိုက်အများဆုံးကနေဗီဒီယိုတွေကိုဒေါင်းလုပ်၏ဖြစ်နိုင်ခြေစဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။ လူမှုကွန်ယက်မှဖိုင်များကိုဒေါင်းလုပ်မရှိတာဝန်ရှိသူတဦးကနည်းလမ်းပေမယ့်, သင့်ဖုန်းရဲ့ဗီဒီယိုမှတ်ဉာဏ်မဆိုကူးယူထုတ်သယ်ဆောင်ရန်အတော်လေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Android နှင့် iOS ပတ်ဝန်းကျင်၌ဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ထိရောက်တဲ့ tool ကိုသင့်ရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကိုဖို့အဆိုပြုထားဆောငျးပါးတှငျဆှေးနှေးပါလိမ့်မည်။
Facebook က၏ကျော်ကြားမှုနှင့်ပျံ့နှံ့နောက်ထပ် features တွေနှင့်အတူအသုံးပြုသူများကိုပေးအဖြစ်လူမှုရေးကွန်ရက်များ၏တရားဝင် client ကို applications များ၏ဖန်တီးသူအားဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးမလုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုအကောင်အထည်ဖော်မှ software ကို developer များအကြားတစ်ခုတိုးလာအကျိုးစီးပွားဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျအမြိုးမြိုးသောကိရိယာများပေါ်တွင် Facebook အထဲကနေဗီဒီယိုတွေကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ခွင့်ပြုသော tools များနှင့် ပတ်သက်. - သူတို့တစ်တွေအမြောက်အများကိုဖန်တီးခဲ့တယ်။
သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ Facebook ကိုမှဗီဒီယိုများ Download
iTunes ကိုနှင့်အတူ Apple က-ကိရိယာကို PC ကနေဗီဒီယိုတစ်ခုကိုလွှဲပြောင်းရန်ကဘယ်လို
ယေဘုယျအားဖြင့် - ဟုတ်ပါတယ်, သငျသညျဆိုလိုသည်မှာမိမိတို့၏မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များ၏မှတ်ဉာဏ်အတွက် PC မှာ disk ကိုလွှဲပြောင်း "အဆင်သင့်" ဖိုင်တွေအပေါ်လူမှုရေးကွန်ရက်ကနေဗီဒီယိုတွေကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်, ပြီးတော့အော့ဖ်လိုင်း mode မှာသူတို့ကိုကြည့်ရှု, အပေါ်ကလင့်များအပေါ်တင်ပြ, ဒီ site မှပစ္စည်းများများ၏အကြံပြုချက်များကိုသုံးနိုင်သည် အချို့ကိစ္စများတွင်သင့်လျော်သော။ ဒါပေမယ့်ရိုးရှင်းများနှင့်အရှိန်မြှင့်ရန်အစမတ်ဖုန်းမှတ်ဉာဏ်ထဲမှာ Facebook ကကနေဒီဗီဒီယိုရယူ၏ဖြစ်စဉ်ကိုကွန်ပျူတာလိုအပ်နှင့် Android သို့မဟုတ် iOS အတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့ application များ၏ခေါင်းပုံဖြတ်အပေါ်အခြေခံပြီးမနည်းလမ်းများကိုသုံးစွဲဖို့ သာ. ကောင်း၏။ အရိုးရှင်းဆုံးနှင့်အရေးအကြီးဆုံးကတော့, ထိရောက်သောကုစားအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
Facebook မှာက Android ပတ်ဝန်းကျင်တွင်အသုံးပြုသူများလူမှုကွန်ယက်အော့ဖ်လိုင်းကနေဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုနိုင်စေဖို့အရေးယူဆောင်ရွက်ချက်များကိုတစ်ဦး sequence ကိုသုံးစွဲဖို့အကြံပြုသည်: - ရင်းမြစ် file ကိုမှ link တစ်ခုလာပြီ - ရှာရန်ရုပ်ရှင်ပေးလိပ်စာများကို applications များတတစ်ပြိုင်နက်ခွင့်ပြု - တိုက်ရိုက်ဒေါင်းလုပ် - စနစ်တည်ဆောက်ခြင်းအကြာတွင်သိုလှောင်မှုနဲ့ပြန်ဖွင့်ဘို့ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
Android အတွက် Facebook ကမှဗီဒီယိုလင့်များရယူခြင်း
Link ကိုဒေါင်းလုဒ်ထွက်သယ်ဆောင်ရန်အားလုံးနီးပါးကိစ္စများတွင်လိုအပ်သည့် video file ကိုပစ်မှတ်ထားနှင့်လိပ်စာရဖို့အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။
အန်းဒရွိုက်များအတွက် Facebook မှာ app ကိုဖွင့်ပါ။ ဒီ client ကိုမှတ်တမ်းရဲ့ပထမဦးဆုံးပစ်လွှတ်သည်ဆိုပါက။ ထိုအခါသင်မှတ်ဉာဏ်ကိရိယာကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ချင်သောလူမှုကွန်ယက်ကိုဗီဒီယိုများ၏ကဏ္ဍများတနေရာချထား။
မျက်နှာပြင်အပြည့်ဖို့ကစားသမားတိုးချဲ့ရန်, ပြန်ကျော့စာမျက်နှာကိုသွား preview ကိုကလစ်ပ်၏ Tapnite ။ ထို့နောက်သုံးစက်ဗီဒီယိုဧရိယာအထက်ထိပုတ်ပါ, ပြီးတော့ select လုပ်ပါ "Copy ကူး Link ကို"။ စစ်ဆင်ရေး၏အောင်မြင်မှုကိုမျက်နှာပြင်၏အောက်ခြေတွင်ခေတ္တမျှစင်ပေါ်ကြပါပြီ, ထိုအသိပေးစာအတည်ပြု။
ဖိုင်များ, ကို Android စမတ်ဖုန်းများ၏မှတ်ဉာဏ်သို့တင်ဆောင်ခံရဖို့လိုအပျကွောငျးလိပ်စာများကိုကူးယူဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူအောက်ပါညွှန်ကြားချက်တွေထဲကမှဆက်လက်ဆောင်ရွက်။
Method ကို 1: ကို Google Play Store မှ loader
သင်က Google ရှာဖွေရေးမေးမြန်းမှုများတွင် Store app နှင့်အမျိုးအစား Play "ဖေ့စ်ဘွတ်ကနေဗီဒီယိုတွေကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်" ဖွင့်လျှင်, သင်ကမ်းလှမ်းမှုတွေအများကြီးရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ Tools များ Third-party developer များအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးပြီးကျယ်ပြန့်၌အကြှနျုပျတို့၏ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်မှဒီဇိုင်းရေးဆွဲ။
(- အသုံးပြုသူများကသရုပ်ပြကြော်ငြာ၏စည်းစိမ်, အဓိကအားဖြင့်), "ကိုဒေါင်းလုဒ်" ၏အများစုမှန်မှန်၎င်းတို့၏ဖန်ဆင်းရှင်တို့ကကြေညာလုပ်ဆောင်ဒါဟာအချို့ချို့ယွင်းချက်ရှိနေသော်လည်းသည်ဟုထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်ကျိုးနပ်သည်။ ဒါဟာ application ကို Google ၏ catalog အချိန်ကျော်ပါ (မော်ဒအားဖြင့်ဖျက်ပစ်) Play အဖြစ် developer များအဆင့်မြှင့်ပြီးနောက်ဖျော်ဖြေဖို့ရပ်တန့်ရန်ကနေပျောက်ကွယ်သွားစေခြင်းငှါစိတ်တွင်ဘွားမြင်ရပါမည်။ သုံးယောက်ဆော့ဖ်ဝဲလ်များဒီဆောင်းပါး၏အရေးအသားစဉ်အတွင်းစမ်းသပ်ပြီးနှင့်ထိရောက်သောဖြစ်ပြမှ links:
Loader ကိုဗီဒီယိုများ Facebook မှ (Lambda L.C.C) အတွက် Download
Video Downloader က Facebook (InShot Inc က) အတွက် Download
FB များအတွက် Video Downloader (Hekaji မီဒီယာ) Download
"ကိုဒေါင်းလုဒ်" ၏လည်ပတ်မှုနိယာမကိုသင်အဆိုပြုထားအထက်တွင်သို့မဟုတ်အလားတူမဆိုသုံးနိုငျ, အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။ အောက်ပါကြေညာချက်၏စံနမူနာအပေါ်သရုပ်ပြ Facebook ကမှဗီဒီယိုကို download လုပ်ပါစေ Lambda L.C.C. အားဖြင့် Video Downloader.
အန်းဒရွိုက်-Store တွင် applications များအနေဖြင့် Video Downloader Install လုပ်ပါ။
ဒါဟာမီဒီယာ Vault ဝင်ရောက်ဖို့ခွင့်ပြုချက်ပေး, ဒီ tool ကို run - ဤဒေါင်းလုပ်ကလစ်များမပါဘဲဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ နောက်ဆုံး screen ပေါ်မှာ, လက်ဝဲမှထွန်းသစ်စသတင်းအချက်အလက်နိန်, လျှောက်လွှာများ၏ဖော်ပြချက်အထဲက Check, အစစ်ဆေးမှတ်မထိ။
ယင်းပတ်ပတ်လည်ခလုတ်ကိုထိပုတ်ပါ "က F" နှင့်လူမှုကွန်ယက်သို့ log ။ မြေတပြင်လုံးအရင်းအမြစ်လုပ်ဆောင်ချက်ကိုထောက်ခံ - မဆို web browser ကိုကနေတဆင့်ရသောအခါ access ကိုနှစ်ဦးစလုံးသည်ဤဂျနဲ့အတူနောက်ထပ် "ခရီးသွား" Facebook ပေါ်မှာရှိနိုင်ပါသည်။
ဖုန်းမှတ်ဉာဏ်၌သူ၏လက်မအပေါ် tapnite ထိန်းသိမ်းထားမည်ဖြစ်ကြောင်းဗီဒီယိုကိုရှာပါ။ အဆိုပါဖွင့်လှစ်ပြတင်းပေါက်မှာတော့နောက်ထပ်အရေးယူဘို့တောင်းဆိုမှုင်ကိုထိပုတ်ပါ "DOWNLOAD" - ဒေါင်းလုပ်ရုပ်ရှင်ကိုချက်ချင်းစတင်ပါလိမ့်မယ်။
အိုင်ကွန်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Loading" စတင်မည်သောမျက်နှာပြင်၏ထိပ်ပိုင်း "Boot ကိုလင့်များ"။ လိပ်စာလယ်ပြင်တွင်, clipboard ထံပေါ်မှာတာရှည်ကိုထိပုတ်ပါနေရာချပြီဆိုရင် "ဒီမှာကဗီဒီယိုဖို့ link ကိုထည့်" ခလုတ်ခလုတ်ကို "ထည့်" - ကကလစ်နှိပ်ပါ။
next ကို tapnite "ရဲ့ contents ပြရန်"။ အဆိုပါဖွင့်လှစ်ပြတင်းပေါက်မှာအရေးယူဆောင်ရွက်မှုကို select, ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "DOWNLOAD"ဒါဟာဖုန်းမှတ်ဉာဏ်မှဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့ကူးယူစတင်။
က boot process ကို Watch, မခွဲခြားဘဲယခင်ခြေလှမ်းအတွက်ရွေးချယ်သုံးစွဲနိုင်နည်းလမ်း၏ကမျက်နှာပြင်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းမှာသုံးမှတ်ကိုထိခြင်းနှင့်ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်ဖြစ်နိုင် "တိုးတက်မှု Download".
ဒေါင်းလုဒ်ပြီးစီးအပေါ်သို့ဖိုင်တွေအားလုံးကိုပင်မမျက်နှာပြင် Video Downloader အပေါ်ပြသလျက်ရှိသည် - မည်သည့် preview ကိုအပေါ်တစ်ဦးရှည်လျားသောစာနယ်ဇင်းဖိုင်ကိုနှင့်အတူတတ်နိုင်သမျှလုပ်ရပ်များများစာရင်းကိုဖြစ်ပါတယ်။
Facebook မှာထံမှအပ်လုဒ်တင်ပြီး app ကို download, ဗီဒီယိုများ, အထက်ပါအဆင့်အတိုင်းလိုက်နာရယူသုံးအပြင်, သငျသညျရှုမွငျနှင့် Android များအတွက်မည်သည့်ဖိုင်မန်နေဂျာသုံးပြီးစည်းရုံးနိုင်ပါတယ်။ Store ကို Directory ကို - "Com.lambda.fb_video" အတွင်းပိုင်းသိုလှောင်မှုအတွက်သို့မဟုတ် (OS ကိုဆက်တင်ပေါ်တွင် မူတည်. ) ဖြုတ်တပ်လို့ရတဲ့သိုလှောင်ရေးကိရိယာ devaysa အပေါ်တည်ရှိပါတယ်။
Method ကို 2: ဖိုင်တွေဒေါင်းလုပ်ဆွဲဘို့က်ဘ်န်ဆောင်မှုများ
အန်းဒရွိုက်၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရာစမတ်ဖုန်းပေါ်တွင် Facebook ကမှဗီဒီယိုကို download လုပ်ပါအခြားသောနည်းလမ်းမဆိုလျှောက်ထားတပ်ဆင်မလိုအပ်ပါဘူး - (- Android အတွက် Google Chrome ကိုအောက်ကဥပမာမှာ) သင့်ရဲ့ device တပ်ဆင်နီးပါးမဆိုအင်တာနက် browser fit ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါအထူးပြုအင်တာနက်ကန်ဆောင်မှုများထဲမှတစ်ခုသုံးပြီးဖိုင်တွေဒေါင်းလုပ်၏ဖြစ်နိုင်ခြေထွက်သယ်ဆောင်ရန်။
သူတို့ထဲကအတော်များများ - Facebook မှာထံမှဗီဒီယိုများဒေါင်းလုပ်လုပ်လိုကူညီပေးနိုငျကွောငျးကိုကို web အရင်းအမြစ်များ, ပတ်သတ်ပြီးအတူ။ ကို Android ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်မှာဤဆောင်းပါးကိုရေးသားခြင်း၏ထိုအချိန်ကသုံးရွေးချယ်စရာ check လုပ်ထားခဲ့ပြီးသူတို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားအောက်တွင်ပြဿနာနှင့်အတူရငျဆိုငျပြီ savefrom.net, getvideo.at, tubeoffline.com။ စစ်ဆင်ရေး၏နိယာမလူကြိုက်အများဆုံးထဲကတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြု savefrom.net အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဥပမာတစ်ခုကဲ့သို့တူညီသော site ကိုဖြစ်ပါတယ်။ စကားမစပ်, Windows ပေါ်မှာကွဲပြားခြားနားသောဘရောက်ဇာကနေတဆင့်သတ်မှတ်ထားသောဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူအလုပ်လုပ်သောကြောင့်ပြီးသားကျွန်တော်တို့ရဲ့ website တွင်ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့သည်။
Yandex Browser ကိုများအတွက် Savefrom.net: ကွဲပြားခြားနားသောဆိုဒ်များကနေအသံ, ဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများ၏လွယ်ကူသောဒေါင်းလုတ်ဆွဲ
Google က Chrome အတွက် Savefrom.net: ကိုအသုံးပြုခြင်းများအတွက်ညွှန်ကြားချက်များ
အော်ပရာများအတွက် Savefrom.net: မာလ်တီမီဒီယာအကြောင်းအရာဒေါင်းလုပ်များအတွက်အစွမ်းထက် tool ကို
Facebook ပေါ်မှာ posted တစ်ဗီဒီယို link ကိုကူးယူပါ။ ထို့နောက်သင့်ရဲ့ဖုန်းပေါ်မှာ browser ကို run ။ အင်တာနက်ကို browser ၏လိပ်စာကိုရိုက်ထည့်savefrom.netကိုထိပုတ်ပါ "ဤနေရာသို့သွားရန်".
ဝန်ဆောင်မှုစာမျက်နှာပေါ်တွင်တစ်ဦးကိုလယ်ရှိ "လိပ်စာကိုရိုက်ထည့်"။ ရှည်လျားသောခေါ်ဆိုမှုခလုတ်ကို display ကိုလယ်ပြင်ကိုနှိပ် "INSERT" ထိုသို့အပေါ် tapnite ။ အဖြစ်မကြာမီဝန်ဆောင်မှုဖိုင်ကိုမှ link တစ်ခုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်အဖြစ်ကခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာစတင်ပါလိမ့်မည် - ကနည်းနည်းစောင့်ဆိုင်းရန်လိုအပ်ပါသည်။
ထို့နောက် link ကို-button ကို click "ဒေါင်းလုပ် MP4 ကို" တစ်ဦး display ကို preview ကိုဗွီဒီယိုနဲ့တစ်ဦး menu ကိုပုံပေါ်သည်အထိကိုင်ထားပါ။ စာရင်းမှာတော့ကို select "link ကိုဒေတာသိမ်းဆည်းပါ" - ကကယ်ဖို့ဒေါင်းလုဒ်ဖိုင်၏အမည်နှင့်လမ်းကြောင်းသတ်မှတ်နိုင်စွမ်းကိုထောက်ပံ့ပေးမယ့် window ကိုဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ထို့နောက်ဒေတာကိုထည့်ပြီး tapnite "DOWNLOAD" အထက်ပါ-ဖော်ပြထားပြတင်းပေါက်နှင့်ဒေါင်းလုတ်ဆွဲပြီးစီးဘို့စောင့်ပါ။
အနာဂတျမှာ, သင်အဓိက browser ကို menu ကိုခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့်ရရှိသောဗွီဒီယိုတစ်ခုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်ကြောင့်များ၏အပိုင်းကိုသွား "ဒေါင်းလုပ်ဖိုင်"။ ထို့အပြင်လိပ်၏ခြယ်လှယ် Android အတွက်ဖိုင်တစ်ဖိုင်မန်နေဂျာကို အသုံးပြု. ဖြစ်စေနိုင်သည် - ပုံမှန်အားဖြင့်သူတို့တစ်တွေ folder ထဲမှာသိမ်းထားပါတယ် "ဒေါင်းလုပ်" အတွင်းပိုင်းသိုလှောင်မှုသို့မဟုတ်ဖြုတ်တပ်နိုင်တဲ့ drive စမတ်ဖုန်းများ၏အမြစ်မှာ။
အထောက်အထားမဲ့ operating system ကို developer များနှင့် Facebook အင်္ဂါရပ်များအကောင်အထည်ဖော်မှု၏စည်းကမ်းချက်များ၌အန်းဒရွိုက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ယင်းကို iOS ကိုပိုမိုကန့်သတ်ကြားမှမှာတော့ဖြစ်နိုင်သမျှ devaysa "ပန်းသီး" မှတ်ဉာဏ်ထဲမှာလူမှုရေးကွန်ရက်ကနေဗီဒီယိုတွေကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်, နှင့်အသုံးပြုသူ tool ကိုရွေးချယ်ဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်။
iOS အတွက် Facebook ကမှဗီဒီယိုလင့်များရယူခြင်း
iPhone ကိုမှဗီဒီယိုများအားဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်နည်းလမ်းများအများအပြားရှိပါတယ်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, တစ်ဦးကိုမိုဘိုင်း device ကိုသိုလှောငျဖို့လူမှုကွန်ယက် server ကနေဖိုင်တစ်ဖိုင်ကော်ပီကူးသွားသူတို့ထဲကတစ်ဦးချင်းစီက iOS ကို clipboard ထဲမှာရုပ်ရှင်မှ link တစ်ခုလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ link ကိုလွယ်ကူသည်ကူးယူပါ။
iOS ကိုများအတွက် Facebook မှာ app ကိုစတင်ပါ။ client ကိုပထမဦးဆုံးအကြိမ်စတင်လျှင်, လူမှုရေးကွန်ယက်များတွင် log ။ ဝန်ဆောင်မှုမဆိုပုဒ်မခုနှစ်တွင်မျက်နှာပြင်အပြည့်ဖို့ပြန်ဖွင့်ဧရိယာကိုတိုးချဲ့ရန်, အော့ဖ်လိုင်းကြည့်ဘို့ကို download လုပ်ပါလိမ့်မယ်တစ်ဦးကဗီဒီယိုကိုရှာပါ။
အဆိုပါကစားဧရိယာလက်အောက်တွင်ကိုထိပုတ်ပါ "Share" ပြီးတော့စာနယ်ဇင်း "link ကိုကူးပါ" မျက်နှာပြင်၏အောက်ခြေတွင်ပေါ်လာမီနူးထဲမှာ။
လူမှုကွန်ယက်၏ directory ကိုမှအရင်းမြစ် file ကိုဗီဒီယိုကလိပ်စာလက်ခံရရှိအပေါ်သို့ကို manual အကောင်အထည်ဖော်ရန်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင် iPhone ကိုမှတ်ဉာဏ်ထဲမှာဒစ်ဂျစ်တယ် downloads, ၎င်း၏အကောင်အထည်ဖော်မှု၏ရလဒ်အဖြစ်ယူဆ။
Method ကို 1: Apple က App Store မှ loader
ယင်းကို iOS ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ဆောင်းပါး၏ခေါင်းစဉ်ကို၏ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးရန်ကုမ္ပဏီစတိုးဆိုင် Apple က applications များထဲတွင်နေရာထားတဲ့ဆော့ဗ်ဝဲကိရိယာ၏အတော်လေးနံပါတ်ဖန်တီးခဲ့သည်။ ဒါမှမဟုတ်ကဲ့သို့ "Facebook ကမှဗီဒီယိုကို download လုပ်ပါရန်" တောင်းဆိုမှုကိုအပေါ်သို့ Loader ရရှိနိုင်ပါသည်ကိုရှာပါ။ ရံဖန်ရံခါလူမှုရေးကွန်ရက်များ၏ content ကို download function ကိုတပ်ဆင်ထားကို web browser များ၏ထိုကဲ့သို့သောမျိုး, အက App Store မှပျောက်ကွယ်သွားသည်ဟုထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်တန်ဖိုးရှိထိုသို့အဖြစ်ကိုသင်သုံးတူရိယာကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်လင့်များကိုတွေ့လိမ့်မည်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဒီတော့အချိန်ကျမ်းပိုဒ်, ဆော့ဖ်ဝဲရေးသားသူ function ကိုလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုဆုံးရှုံးစေခြင်းငှါ, စာအရေးအသား၏ထိုအချိန်ကထိရောက်သော ဆောင်းပါး။
Facebook အထဲကနေဗီဒီယိုတွေကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ဒီနေရာမှာ Adblock (Nik Verezin) နဲ့ပုဂ္ဂလိက Browser ကို Download လုပ်ပါ
DManager (Oleg Morozov) လျှောက်လွှာကို iPhone ဖို့ FB ကနေဗီဒီယိုတွေကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲဘို့ Download
Facebook ကမှဗီဒီယို Downloader ကို Download လုပ်ပါ - ဗီဒီယို Saver Pro ကို 360 WIFI ထံမှ Apple က App Store ကိုမှသည်
အဆိုပြုထားရန်ပုံငွေများမဆိုနောက်ဆုံးမှာအလုပ်လုပ်ကိုင်ရပ်လျှင်သင်ကအခြားသုံးနိုငျ - ဖြေရှင်းချက်အမျိုးမျိုးအတွက် iPhone ပေါ်မှာ Facebook မှာထံမှဒေါင်းလုပ်ဗီဒီယိုများပါဝင်သော, လုပ်ရပ်တွေကို၏ algorithm ကိုတစ်ကဏ္ဍနီးပါးတူညီဖြစ်ပါတယ်ဖော်ပြရန်။ အောက်ကဥပမာမှာ - ဒီနေရာမှာ Adblock နှင့်အတူပုဂ္ဂလိက Browser ကို Nik Verezin ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
Apple ရဲ့ App Store မှလျှောက်လွှာ loader ကို Install လုပ်ပါ။ Third-party applications များမှတဆင့်လူမှုကွန်ယက်မှကို log in ချင်ကြဘူးလျှင်, အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့ Agios နည်းလမ်း clipboard မှဗီဒီယို link ကို copy ဖို့မေ့လျော့တော်မမူပါနှင့်။
ပုဂ္ဂလိက Browser ကိုလျှောက်လွှာစတင်ပါ။
သင်ပိုမိုသင့်လျော်သောဖြစ်ဟန်အဖြစ်ဆက်လက်ဆောင်ရွက် - သို့မဟုတ် Facebook သို့ log နှင့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားတဲ့ "ဘရောက်ဇာကို" မှတဆင့်လူမှုကွန်ယက်ကိုအသုံးပြုရန်သို့မဟုတ်လိပ်စာဘားတစ်ဦးကဗီဒီယို input ကိုမှ link တစ်ခုထည့်သွင်း:
, login website ကိုသှားဖို့ facebook.com (ထိုပုဂ္ဂလိက Browser ကို app ကို home screen ကအတွက်လူမှုကွန်ယက်အိုင်ကွန်-tab ကိုအပေါ် Tapnite) နှင့်ဝန်ဆောင်မှုရယူရန်သင့် username နှင့် password ကိုရိုက်ထည့်ပါ။ ယင်းနောက်ဗီဒီယိုကိုရှာဖွေ, ထိုးသွင်းခံရဖို့စီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။
လယ်ပြင်၌ယခင်ကကူးယူ link ကို, ရှည်လျားစာနယ်ဇင်း paste လုပ်ပါ "web ရှာဖွေရေးသို့မဟုတ်နာမည်တစ်ခု ... " တစ်ခုတည်းအချက်ပါဝင်သောပွင့်လင်း menu က - "Paste"သို့ဖြစ်လျှင်ဤခလုတ်ကိုထိပုတ်ပါနှင့် tapnite "Go" လက်ကွက်ပေါ်မှာ။
Tapnite button ကို "Play" ယင်း preview ကိုဗီဒီယိုထဲမှာ - action ကို menu ကိုစတင်ကစားနှင့်အတူ။ တို့ "ဒေါင်းလုပ်"။ ဒါကအားလုံးရဲ့ - ဒေါင်းလုဒ်စတင်ခဲ့ပြီ, သင်အွန်လိုင်းဗီဒီယိုများဆက်လက်ကြည့်ရှု, ဒါမှမဟုတ်အခြားအကြောင်းအရာကိုမှသွားနိုင်ပါတယ်။
ဒေါင်းလုပ်ရယူစေရန်, နဲ့ iPhone ကိုဗီဒီယို၏မှတ်ဉာဏ်ထဲတွင်နေရာဖြစ်ပါတယ်, ကိုသွား "ဒေါင်းလုဒ်များ" မျက်နှာပြင်၏အောက်ခြေမှာ menu ကနေ - ကဒီမှာသင်အကြာတွင် devaysa မှတ်ဉာဏ်အတွက်မိတ္တူ roller ၏လုပ်ငန်းစဉ်စောင့်ကြည့်ခြင်း, နိုင် - သောအခါ၌ပင်ဒေတာကွန်ရက်ဧရိယာ၏အကွာအဝေးထဲကကစားသူတို့ကိုစတင်ရန်။
ကွဲပြားခြားနားသော strimingovyh အရင်းအမြစ်များကိုမှဗီဒီယိုနှင့်ဂီတကို iOS ပတ်ဝန်းကျင်များတွင်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဒေါင်းလုတ်လုပ်ခွင့်ပြုကြောင်းအများအပြားအွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများမှလူသိများ။ သင် iPhone ပေါ်မှာ Facebook ကနေဗီဒီယိုတစ်ခုကိုကော်ပီကူးလိုက်တဲ့အခါဤဆိုဒ်များ၏ထိရောက်မှုကိုပြသ: savefrom.net, getvideo.at, tubeoffline.com.
လိုချင်သောရလဒ်ရဖို့, ဆိုလိုသည်မှာဤဝန်ဆောင်မှုများ၏တဦးတည်းကိုအသုံးပြုပြီးဖိုင်တစ်ဖိုင်ကို download လုပ်ပါနောက်ထပ်ဆက်ကပ်အပ်နှံ application ကိုမလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ အများစုမှာမကြာခဏအဆိုပြုထားနည်းလမ်းကိုသုံးပြီးပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မှ iOS နှင့် web browser ကိုအတွက် "ဟိုက်ဘရစ်" ဖိုင်မန်နေဂျာတစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာကိုအသုံးပြုသည်ဥပမာ - အဘို့, Readdle ထံမှစာရွက်စာတမ်းများ, file ကိုမာစတာ ရှန်ကျန်း Youmi သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာကုမ္ပဏီထံမှ Ltd နှင့်အခြားသူများကို။ လက်ရှိလုပ်ငန်းစဉ်အရင်းအမြစ်စပ်လျဉ်းနီးပါးတစ်လောကလုံး, ငါတို့သည်လူမှုကွန်ယက် VKontakte, Odnoklassniki ကနေအကြောင်းအရာလက်ခံရရှိနှင့်အခြား repositories ကပေါ်မှာငါတို့ဆောင်းပါးများအတွက်၎င်း၏အသုံးပြုမှုကိုသရုပ်ပြပါပြီ။
စာရွက်စာတမ်းများလျှောက်လွှာနှင့်အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြု. iPhone ကိုက c အပေါ် VKontakte ကနေဗီဒီယိုတွေကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်လုပ်နည်း
ဖိုင်မှတ်တမ်းမာစတာလျှောက်လွှာနှင့်အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုကနေတစ်ဆင့်အိုင်ဖုန်းက c အတွက်အတန်းဖော်များထံမှဗီဒီယိုများဒေါင်းလုတ်လုပ်လုပ်နည်း
အိုင်ဖုန်း / iPad ပေါ်တွင် Internet မှဗီဒီယိုများ Download
ဖိုင်မန်နေဂျာသုံးပြီး Facebook မှာထံမှဗီဒီယိုများဒေါင်းလုဒ်လုပ်ဖို့, သငျသညျတိကျစွာအထက်ပါလင့်ခ်ပေါ်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်လမ်းညွှန်အတိုင်းလိုက်နာနိုင်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်, ညွှန်ကြားချက်အောက်ပါထည့်သွင်းစဉ်းစားအောက်ရှိလူမှုကွန်ယက်ကနေဗီဒီယိုလိပ်စာသတ်မှတ်မဟုတ်, VC ကို သို့မဟုတ် OK ကို။ ကျနော်တို့ထပ်တလဲလဲ, နှင့် functional ဖြစ်စေထည့်သွင်းစဉ်းစား "hybrids တွေကို," နှင့်အခြားထိရောက်သော tool ကို download လုပ်ကိုဖော်ပြရန်မည်မဟုတ်ပါ - အဆင့်မြင့် features တွေနှင့်အတူ iOS အတွက် web browser ကို - UC Browser ကို.
Apple ရဲ့ App Store မှ iPhone အတွက် UC Browser ကို Download လုပ်ပါ
Apple က App Store မှပြစ်မှုဆိုင်ရာ browser ကို Install လုပ်ပြီးပါကဖြန့်ချိ။
ထည့်သွင်းမှုက်ဘ်ဆိုက်လိပ်စာအီးမေးလ်ထဲတွင်ru.savefrom.net(ဒါမှမဟုတ်အခြားဦးစားပေးဝန်ဆောင်မှု၏အမည်), ပြီးတော့ကိုထိပုတ်ပါ "Go" လက်ကွက်ပေါ်မှာ။
လယ်ပြင်၌ "လိပ်စာကိုရိုက်ထည့်" ဝန်ဆောင်မှုစာမျက်နှာပေါ်တွင် Facebook က directory ကိုအပေါ် posted ဗီဒီယိုတစ်ကားကိုတစ်ဦး link ကိုထည့်သွင်း။ အဆိုပါသတ်မှတ်ထားတဲ့ဧရိယာကိုပွင့်လင်း Menu ထဲမှာဒီရှည်လျားစာနယ်ဇင်းပြုပါထို့နောက်ရွေးဖို့ "ထည့်"။ လိပ်စာကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်, ကို web service ကိုအလိုအလျှောက်ပါကခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပါလိမ့်မယ်။
ယင်း preview ကိုဗီဒီယို, စာနယ်ဇင်းနှင့်ကိုင်၏အသွင်အပြင်ပြီးနောက် "ဒေါင်းလုပ် MP4 ကို" ဖြစ်နိုင်ချေလုပ်ရပ်များနှင့်အတူမီနူးအထိပါပဲ။ ကို Select လုပ်ပါ "Save As ကို" - ဒေါင်းလုဒ်ကိုအလိုအလျောက်စတင်ပါလိမ့်မယ်။
ထိုလုပ်ငန်းစဉ်စောင့်ကြည့်ခြင်း, အနာဂတျတှငျမှ - ဆွဲယူတဲ့ဖိုင်တွေရဲ့ခြယ်လှယ်, အဓိက UC Browser ကိုမီနူး (မျက်နှာပြင်၏အောက်ခြေတွင်သုံးဒက်ရှ်) ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်သွားပါ "ဖိုင်များ"။ tab ကို "ဒေါင်းလုပ်" လက်ရှိဝန်ဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးသားမှတ်ဉာဏ်အကြောင်းအရာကို iPhone အတွက် UC Browser ကို၏အကူအညီနှင့်အတူထားရှိထားတဲ့ tab ကိုသွားနေဖြင့်နိုင်ပါတယ် detect, မျိုးပွား, အမည်ပြောင်းနှင့် delete "ဒေါင်းလုတ်" နှင့်ဖိုင်တွဲဖွင့်လှစ် က "Other".
သင်တို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်သကဲ့သို့, Android, iOS device ကိုအောက်မှာ operating, ဖုန်းရဲ့မှတ်ဉာဏ်ထဲမှာ Facebook ကမှဗီဒီယိုများကို download လုပ်ပါ - doable ပေမယ့်ပြဿနာတစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းကနေဝေး။ ကျွန်တော်တို့ဟာ Third-party developer များအနေဖြင့်သက်သေပြ tools တွေကိုသုံးပါနှင့်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းပြုမူပါက, သင့်မိုဘိုင်းကိရိယာ၏မှတ်ဉာဏ်ထဲမှာလူကြိုက်အများဆုံးလူမှုကွန်ယက်ကနေဒေါင်းလုပ်ဆွဲဗီဒီယိုများပင်အတွေ့အကြုံမရှိသေးသောအသုံးပြုသူကိုကိုင်တွယ်နိုင်ပါတယ်။
ဗီဒီယို Watch: New AMAZFIT3Smart WatchYou Can Buy in Online Store RisoFan (စက်တင်ဘာလ 2019).
https://termotools.com my.termotools.com © ဖုန်းကို 2019